Maamulka gobolka Banaadir oo shaaciyay inuu bilaabayo qaadista dhagxaanta lagu xiray wadooyinka (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maamulka gobolka Banaadir oo shaaciyay inuu bilaabayo qaadista dhagxaanta lagu xiray wadooyinka (SAWIRO)
Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta shaaca ka qaaday inuu bilaabayo qaadista dhagxaanka lagu gooyay inta badan wadooyinka ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane ayaa sheegay in guddoomiyaha gobolka uu amar ku bixiyay in la qaado dhagxaanta lagu jaray waddooyinka, isagoo ku dooday inaan loo dulqaadan doonin waddooyinka muhiimka ah ee dhagxaan lagu xiray.
C/fitaax Cumar Xalane oo ah nin ku caan baxay iidheh uu u sameeyo guddoomiyihiisa ayaa aad uga bad-badiyay arrintaan oo ah mid ay u caal weysay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud, kana mid ah dhaxalkiisa xun.
Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale (Boorsaani) ayaa laf ahaantiisa dhowr jeer awoodi waayay inuu wax ka qabto arrintaan, waxaan la ogyahay inay u xiran tahay qeyb ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala degmada X/weyne ee magaalada Muqdisho.
Guddoomiye Boorsaani ayaa loo arkaa inuusan wax awood au lahayn wax ka qabashada wadooyinka xiran ee Muqdisho oo mas’uuliyiinta ay u xiran tahay uu ka mid yahay, waxaana bandhigii maanta uu ahaa mid ku kooban wadooyin aan muhiim ahayn.